Ururka Jaamacadda Carabta oo baaq kasoo saaray muranka doorashada Soomaaliya - Awdinle Online
Ururka Jaamacadda Carabta oo baaq kasoo saaray muranka doorashada Soomaaliya
Wadamo badan iyo Ururo Caalami ah oo daneeya Arrimaha Soomaaliya ayaa baaqyo kala duwan ka soo saarey xaalada cakiran ee siyaasada Soomaaliya maadama weli an wax hehsiis ah laga gaarin doorashooyinka Soomaaliya.
Ururka Jaamacada Carabta oo baaqyadaasi kuwoodii ugu danbeeyey soo saarey ayaa sheegay in ay muhiim tahay in hogaamiyayaasha Siyaasada ee Soomaalida ay wadahadlaan.
War kasoo baxay Ururka ayaa waxaa lagu sheegay in Jaamacadda Carabta ay tixgelineyso dadaalada ay sameynayaan Madaxda Sare ee dowladda Federaalka Soomaaliya & dowlad goboleedyada si loo helo xal kama dambeysa ah oo ku aaan qaabka loo qabanayo doorashada dalka.
“Jaamacadda Carabta waxaa ay amaaneysaa shirarka loogu gogol xaaray qabashada doorashada oo kii ugu dambeeyay uu ahaa midkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa lagu yiri” Warka kasoo baxay Ururka Jaamacadda Carabta.
Sidoo kale Ururka Jaamacadda ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta qeybaha siyaasadda ee Soomaliya inay dib u bilaabaan wada-hadalalda ku aadan sidii loo gaari lahaa doorash loo dhan yahay oo ka dhacda Guud ahaan dalka Soomaliya.
Ugu dambeyn Ururka Jaamacada Carabta ayaa soo dhaweeyay shirkii uu ku baaqay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi farmaajo, isla markaana ay taageerayaan sidii ay u gaari lahaayeen xal waara oo isku heynaya Midnimada Soomaaliya.
Wakan kasoo baxay Ururka Jaamacada Carabta ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli an xal laga gaarin arrimaah doorashooyinka Soomaaliya, isla markaana dhawaan la qabanayo shir wadatashi ah oo looga hadlayo sidii loo qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay.
Previous articleGuddiyo si hor dhac ah uga wada hadlaya shirka uu ku baaqay Farmaajo
Next articleFarmaajo oo la sheegay in uu si sharci darro ah Xubno u saxiixay